Mandalay Branch - Metro IT & Japanese Language Centre
01 - 372 691 mminfo@metro-myanmar.com
Metro IT & Japanese Language Centre ( Mandalay Branch )
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန်အလို့ငှာ Metro IT Business College ၏ ပညာရေးလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် Metro IT & Japanese Language Centre ( Mandalay Branch ) ကို 2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 1 ရက်နေ့မှ စတင်၍ မန္တလေးမြို့၌ ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Metro IT Business College ကျောင်း၏ သင်ရိုးညွန်တမ်းများအတိုင်း System Creator Course (2years ) သင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိနေပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် မန္တလေးကျောင်းခွဲ၌ 1st Batch နှင့် 2nd Batch ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် IT နည်းပညာရပ်များနှင့် ဂျပန်ဘာသာစကား ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာသင်ယူလျှက် ရှိကြပါသည်။
8th, 15th, 22nd, 29th . September . 2018 ( IT Course Seminar )
( 10:00 ~ 12:00 ) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ IT နည်းပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာများကို ရှင်းလင်းဟောပြောပေးမည့် IT Course Seminar
22nd . September . 2018 ( Free Trial Lecture )
( 10:00 ~ 12:00 ) IT Course Seminar ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် IT နည်းပညာရပ်များသည် မိမိတို့ဝါသနာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆန်းစစ်နိုင်ကြစေရန်နှင့် Metro ကျောင်း၏ပညာသင်ကြားရေးပုံစံများကို လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Free Trial Lecture ကို စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ မပျက်မကွက် လာရောက်၍ လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြဘို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Mandalay Branch Facebook